Ahoana ny fiofanana Chihuahua | Alika Manerantany
Ahoana ny fiofanana Chihuahua
Ny Chihuahua dia alika manana ny lazany noho ny maha-biby be fahatahorana azy ary manao izay tiany foana, na dia lazaina hafa aza. Fa ny marina dia ny volony ihany no manao ... izay navelan'ny olony hataony hatramin'ny naha alika azy.
Heverina matetika fa biby kely dia tsy mila fiheverana be toy ny alika lehibe. Saingy tena hafa tanteraka ny zava-misy: na inona na inona habeny, ny alika rehetra dia mila fanabeazana. Satria, Hitanay ny fomba hampiofanana chihuahua.
1 Ny faharetana, ny fanajana ary ny fitiavana, no lakilen'ny fahombiazana
2 Ahoana ny fiofanana Chihuahua?
2.2 Ampianaro izy hanala ny tenany any ivelany
2.3 Aza mitondra azy toy ny zazakely
Ny faharetana, ny fanajana ary ny fitiavana, no lakilen'ny fahombiazana
Tsy misy intsony. Adinoy ny teoria "alpha male", tsy manao inona akory fa mampatahotra anao ny alika. Amin'ireto zavatra telo ireto ihany (tsara ary miaraka amin'ny fitsaboana alika 🙂) azonao atao ny manao ny chihuahua anao ho alika tia fiaraha-monina sy nahita fianarana.
Ahoana ny fiofanana Chihuahua?
Tsy misy na inona na inona mety hampisavoritaka ny alika toy ny fiovan'ny sain'ny olombelona. Raha te hahalala zavatra ianao dia tokony hifanaraka amin'ny fanapahan-kevitrao. Raha tsy tianao ny hiakarany amin'ny sofa na ny fandriany manomboka amin'ny andro voalohany dia aza avela hianika izy.
Raha hitanao fa mikasa ny hanao izany izy, lazao ny TSIA mafy fa tsy mikiakiaka. Rehefa lasa ny folo segondra ary nilamina ny alika dia omeo fitsaboana izy.
Ampianaro izy hanala ny tenany any ivelany
Ny iray amin'ireo zavatra "maika" tokony hampianarinao azy dia ny fanamaivanana ny tenany any ivelany na amin'ny toerana iray. Manana tatavia kely, ara-dalàna raha tsy maintsy mandeha any amin'ny trano fidianao manokana matetika ianao.
Hanampy anao hianatra, Ento mivoaka mitsangatsangana 20 na 30 minitra aorian'ny fisakafoanana izy, na ento any amin'ny efitrano tianao hanamaivanana ny tenany izy aorian'io fotoana io. Rehefa mahita azy manomboka manofoka ny tany sy / na mihodinkodina ianao dia satria hataony izany. Rehefa vita dia omeo fitsaboana.
Aza mitondra azy toy ny zazakely
Fahadisoana lehibe tokoa izany. Satria kely dia kely dia maro ny olona mieritreritra fa azo entina mandehandeha anaty kalesin-jaza izy ireo na voafihina eo an-tsandriny. Fa tsy izany no izy. Ny chihuahua dia alika izay manana filàna fototra mitovy amin'ny karazana hafa rehetra.
Asio kapaoty aminy ary afatory aminy ny fehy ary ento mivezivezy izy. Ao an-trano, mazava ho azy ianao dia mila manome fitiavana azy be dia be, ary hevitra tsara indrindra aza ny mamela azy hiara-matory aminao, fa aza atao toy ny zaza olombelona satria raha tsy izany dia mety ho very hevitra be izy.
Raha te hahafantatra ny fomba hampianarana azy fika ianao dia kitiho eto.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Training » Ahoana ny fiofanana Chihuahua
Fikarakarana fototra ny tongotry ny alika
Ahoana ny fomba hampianarana alika handeha tsy misintona ny tadiny